အင်တာနက်သုံးသူ မြန်မာယောင်္ကျားလေးများ သတိထားစရာ မိန်းခလေးတစ်ဦး(ပေးစာ - ၁၅၁) ~ Myanmar Express
အင်တာနက်သုံးသူ မြန်မာယောင်္ကျားလေးများ သတိထားစရာ မိန်းခလေးတစ်ဦး(ပေးစာ - ၁၅၁)
အခုဆိုရင် မလေးရှားတွင်အလုပ်လုပ်နေသောယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်မှာသူ့အကြောင်း အကြောင်းစုံသိရှိပြီးနောက် ယူကျုံးမရဖြစ်ကာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဆုံးစီရင်ရန်ကြိုးစားနေကြောင်းသိရှိရသည်။ကာယကံရှင် ယောကျာ်းလေး မရှိချိန်မှာလည်း ယင်းယောကျာ်းလေးရဲ့ အခန်းဖော် ယောကျာ်းလေးများကိုပါ ထပ်ပြီးSkypeမှာမဖွယ်မရာ လုပ်ဖို့ကြိုးစားပြန်ပါတယ်။အခန်းဖော်ယောကျာ်းလေးများက၎င်းမှာချစ်သူရှိကြောင်းနဲမလုပ်သင့်ကြောင်းပြောသော်လည်းလက်ရှိချစ်သူထက်ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာတွေ ပြမည်ဖြစ်သောကြောင့်Skypeကြည့်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုရာမှမရချိန်မှာ စိတ်ဝင်စားအောင်အသံချွဲအသံများဖြင့်ပြောဆိုသွားပါတယ်။ မိန်းကလေးတို့အိနြေ္ဒရွှေပေးလို့မရ ဆိုတဲ့ စကားပုံကို မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်ကာ အင်တာနက်ပေါ်တွင် မိန်းမရွှင်တစ်ဦး အဖြစ် ကျင်လည်နေသောကြောင့် ယောကျာ်းလေးများအနေဖြင့်သတိထားကြပါရန် တင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ယခုသူမလက်ရှိသုံးနေသော် facebook အကောင့်မှာ http://www.facebook.com/DawnAhyoneOo ဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Express Posted in: ဆင်ခြင်စရာ
17 June 2012 23:44
အဲလိုဆိုတော့ သူက မင်းသမီးလေးဖြစ်ချင်နေတာနေမှာပေါ့
Is it true? Where is the evidence? If not, it is not good for her personality...
18 June 2012 03:09
18 June 2012 07:20
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရည်းစားဖြစ်ချင်လိုက်တာနော်...ယောက်ျားလေးပဲ ဘာနာတာကျလို.
ဟုတ်လို့လား။ ဒီကိစ္စအမှန်ဆိုရင်တော့ တော်တော်စိတ်ပျက်စရာပဲ။ မဟုတ်ရင်တော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေလို့ ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။
I want to ask tha boy from Malaysia " why do u want to subside cos of one lady? " and I want to ask the man who posted this message " why do u want to issue that news and why didn't u mention your name? " Actually, more than this girl, these men are very very stupid. Am I right or wrong?
19 June 2012 03:00
It's not worth posting this news whether it's true or not.Most readers surf this site for reading important news concerning Myanmar Affairs.It's so romantic to post that news in this site.Thanks Myanmar Express
အ များ ကြီး ကြီး ရှိ တယ် ဆို ပေး ကြ ပါ ပညာ ပေး ချင် လို့
Cannot be like this!
28 June 2012 23:25
30 June 2012 16:28
အေး အဲ့ကောင်မကို ငါက ............ဟီးဟီး
တော် တော် မ လွယ်တဲ့ဟာတွေပဲနော်
3 July 2012 23:02
9 July 2012 08:22
တခြားဟာတော့မသိဘူး သူကကုလားမတော်တော်ဖြစ်ချင်လို့ ကုလားအကျီင်္တွေဝတ်ပြီး၇ိုက်ထားတယ် ကြည့်မလား evidence လိုတယ်ဆိုလုိ့ပါ http://www.facebook.com/photo.php?fbid=323417457677067&set=a.321026844582795.80083.100000264473177&type=3
9 July 2012 14:24
ဆန် ကုန် မြေ လေး
skype လိပ်စာနဲ့ အီးမေးလိပ်စာပေးပါလားဗျာ စိတ်ဝင်စားလို့ဗျာ
ေ မာ င်လေးရေး
14 July 2012 22:14
Before you give your comment, pls rectify the evidence..
17 July 2012 13:38
2 June 2013 08:45
ကျွန်တော်လဲ ရှမ်ပြည်နယ်က ခြူးဆိုတဲ့ မိန်းခလေးနဲ့ ဒီလိုပဲ ခံလိုက်ရတယ်ဗျ အွန်းလိုင်းမှာတွေ့ပြည်းတော့
2 June 2013 09:08
အဲဒါမျိုး မိန်းကလေးတွေ အများကြီးရှိတယ် ကိုလဲခံလိုက်ရတယ်